Inona no atao hoe famonjena - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
lahatsoratra > Ny hoavy > Inona no atao hoe famonjena?
Fa maninona aho no velona Misy tanjona ve ny fiainako? Inona no hitranga amiko rehefa maty aho? Fanontaniana lehibe napetraky ny tsirairay tamin'ny tenany talohan'izay. Fanontaniana izay hovalianay anao eto, valiny tokony haseho: Eny, misy dikany ny fiainana; eny, misy fiainana aorian'ny fahafatesana. Tsy misy azo antoka kokoa noho ny fahafatesana. Indray andro dia mahazo ilay vaovao mampatahotra isika fa maty ny havantsika iray. Mampahatsiahy antsika tampoka izany fa tsy maintsy ho faty rahampitso koa isika amin'ny taona ho avy na amin'ny antsasaky ny taonjato. Ny tahotra ny ho faty dia nanery ny maro, ohatra, ny mpanohitra an'i Ponce de Leon hitady ny loharanon'ny tanora malaza. Fa ny mpijinja dia tsy azo esorina. Tonga amin'ny olona rehetra ny fahafatesana.
Androany dia manantena ny fanitarana sy fanatsarana ny fiainana ara-tsiansa sy teknika. Fihetseham-po inona raha toa ka nahita ireo mekanika biolojika afaka nanemotra na mety hampiato ny fahanterana mihitsy aza ny mpahay siansa? Io no vaovao lehibe sy mavitrika indrindra amin'ny fandraisana an-tany.
Na izany aza, na dia ao amin'ny tontolontsika maoderina indrindra aza dia fantatry ny ankamaroan'ny olona fa nofinofy tsy tanteraka izy io. Betsaka àry no mifikitra amin'ny fanantenana ho tafita velona aorian'ny fahafatesana. Angamba iray amin'ireo manantena ianao. Tsy mahafinaritra ve raha tena miaina amin'ny tanjona lehibe ny ain'olombelona? Inona no anjara asan'ny fiainana mandrakizay? Ity fanantenana ity dia ao amin'ny drafitry ny famonjena.
Eny tokoa, Andriamanitra dia mikasa ny hanome ny olona ny fiainana mandrakizay. Nanoratra ny apostoly Paoly fa Andriamanitra, izay tsy mandainga, dia nampanantena fanantenana ny amin’ny fiainana mandrakizay ... hatramin’ny andro fahiny ( Titosy 1:2 ).
Any amin’ny toerana hafa dia manoratra izy fa tian’Andriamanitra hovonjena sy ho tonga amin’ny fahalalana ny fahamarinana ny olona rehetra (1. Timoty 2:4, mpandika teny maro). Tamin’ny alalan’ny filazantsaran’ny famonjena, izay notorin’i Jesosy Kristy, dia niseho tamin’ny olona rehetra ny fahasoavan’Andriamanitra ( Titosy 2:11 ).
Nalefa ho faty
Tonga tao amin'izao tontolo izao tao amin'ny Sahan'i Edena ny ota. Nanota i Adama sy Eva, ary nanao toy izany koa ny taranany. Ao amin'ny Romana 3 dia nanazava i Paoly fa manota ny olona rehetra.
Tsy misy olona marina (andininy 10)
Tsy misy olona manontany momba an'Andriamanitra (andininy 11)
Tsy misy manao ny tsara (and 12)
Tsy misy fahatahorana an’Andriamanitra (and 18).
... mpanota daholo izy rehetra ary tsy manana ny voninahitra tokony hananan'Andriamanitra, hoy i Paoly (and 23). Nitanisa ny zava-dratsy nateraky ny tsy fahaizantsika mandresy ny ota isika - ao anatin'izany ny fialonana, vonoan'olona, ​​fahalotoam-pitondrantena ary herisetra (Romana 1: 29-31).
Ny apostoly Petera dia miresaka momba ireo fahalemen’ny olombelona ireo ho filan’ny nofo izay miady amin’ny fanahy (1. Petera 2:11); Antsoin’i Paoly ho filan’ny fahotana izany ( Romana 7:5 ). Milaza izy fa miaina araka ny fanaon’izao tontolo izao ny olona ka mitady hanao ny sitrapon’ny nofo sy ny saina ( Efesiana 2:2-3 ). Na ny fihetsika sy ny fisainan’olombelona tsara indrindra aza dia tsy mifanaraka amin’izay lazain’ny Baiboly hoe fahamarinana.
Ny lalàn'Andriamanitra dia mamaritra ny ota
Ny dikan’ny hoe manota, ny dikan’ny hoe manao zavatra mifanohitra amin’ny sitrapon’Andriamanitra, dia tsy azo faritana raha tsy mifanohitra amin’ny lalàn’Andriamanitra ihany. Ny lalàn'Andriamanitra dia maneho ny toetran'Andriamanitra. Mametraka ny fenitra amin'ny fitondran-tena tsy misy ota ny olona. ... fahafatesana no tambin’ny ota, hoy i Paoly ( Romana 6:23 ). Ity fifandraisana ity izay mitondra ny fanamelohana ho faty dia natomboka tamin'i Adama sy i Eva ray aman-drenintsika voalohany. Hoy i Paoly amintsika: ... tahaka ny nidiran'ny ota avy tamin'ny olona iray [Adama] ho amin'izao tontolo izao, ary ny ota avy tamin'ny ota, dia tonga tamin'ny olona rehetra ny fahafatesana satria samy nanota izy rehetra (Romana 5:12).
Andriamanitra irery ihany no afaka mamonjy antsika
Ny tambin-karama, ny sazin'ny ota dia fahafatesana ary mendrika izany isika rehetra satria samy efa nanota. Tsy misy na inona na inona azontsika atao hialana amin'ny fahafatesan'ny sasany. Tsy afaka hiasa miaraka amin'Andriamanitra isika. Tsy misy azontsika atolotra azy. Na ny asa tsara aza dia tsy mahavonjy antsika amin'ny hoavintsika. Tsy misy na inona na inona azontsika atao afa-tsy hanova ny tsy fahalavorariana ara-panahy ananantsika.
Toe-javatra marefo, fa etsy ankilany manana fanantenana azo antoka sy azo antoka isika. Nanoratra tamin'ny Romana i Paoly fa ny zanak'olombelona dia iharan'ny tsy fahatanterahana tsy misy sitrapony, fa amin'ny alàlan'izay na iza na iza nampanaiky azy, fa manantena (Romana 8:20).
Andriamanitra dia hamonjy antsika amin'ny tenantsika. Vaovao tsara re izany! Hoy koa i Paoly: ... fa ny zavaboary koa dia ho afaka amin’ny fatoran’ny fahalòvana ho amin’ny fahafahana be voninahitr’ireo zanak’Andriamanitra (andininy 21). Andeha isika izao handinika akaiky ny fampanantenan’Andriamanitra momba ny famonjena.
Jesosy dia mampihavana antsika amin'Andriamanitra
Na dia talohan’ny nahariana ny olombelona aza dia efa napetraka ny drafitry ny famonjen’Andriamanitra. Hatramin’ny niandohan’izao tontolo izao, Jesosy Kristy, Zanak’Andriamanitra, no Zanak’ondry natao sorona voafidy (Apokalypsy 13:8). Nanambara i Petera fa ny Kristiana dia havotana amin’ny ra sarobidin’i Kristy, izay voafidy talohan’ny nanorenana izao tontolo izao (1. Petera 1:18-20).
Ny fanapahan-kevitr’Andriamanitra hanolotra fanatitra noho ny ota no lazain’i Paoly fa fikasana mandrakizay notanterahan’Andriamanitra ao amin’i Kristy Jesosy Tompontsika ( Efesiana 3:11 ). Raha nanao izany dia naniry Andriamanitra amin'ny andro ho avy ... mba hampiseho ny haren'ny fahasoavany amin'ny fahamoram-panahiny amintsika ao amin'i Kristy Jesosy (Efesiana 2: 7).
Jesosy avy any Nazareta, Andriamanitra tonga nofo, dia tonga ka nonina tamintsika (Jaona 1:14). Nanjary olombelona izy ary nizara ny zavatra ilainay sy ny fanahiantsika. Nalaim-panahy tahaka antsika izy nefa tsy nanota (Heb. 4:15). Na dia lavorary sy tsy nisy ota aza izy, dia nanao sorona ny ainy noho ny fahotantsika.
Fantatsika fa nofantsihan'i Jesosy teo amin'ny hazofijaliana ny trosantsika ara-panahy. Nodioviny ny kaontin'ny fahotantsika mba hahafahantsika miaina. Jesosy maty hamonjy antsika!
Ny antony manosika an'Andriamanitra handefa an'i Jesosy dia aseho mazava tsara ao amin'ny iray amin'ireo andininy malaza ao amin'ny Baiboly eto amin'izao tontolo izao kristiana: Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanani-lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa mandrakizay manana fiainana (Jaona 3:16).
Ny asa nataon'i Jesosy dia mamonjy antsika
Nirahin'Andriamanitra ho amin'izao tontolo izao Jesosy mba hamonjeny izao tontolo izao (Jao. 3:17). Amin'ny alalàn'i Jesosy ihany no ahazoantsika famonjena. ... tsy misy famonjena amin’ny hafa, ary tsy misy anarana hafa nomena ny olona ambanin’ny lanitra izay hahazoantsika famonjena ( Asan’ny Apostoly 4:12 ).
Ao amin'ny drafi-pamonjen'Andriamanitra dia tsy maintsy hamarinina sy hihavana amin'Andriamanitra isika. Ny fanamarinana dia mihoatra lavitra noho ny famelan-keloka fotsiny (izay, na izany aza, tafiditra ao). Mamonjy antsika amin'ny ota Andriamanitra, ary amin'ny herin'ny fanahy masina dia mamela antsika hatoky sy hankato ary hitia azy isika.
Ny soron’i Jesosy dia fanehoana ny fahasoavan’Andriamanitra izay manala ny fahotan’ny olona iray ary manafoana ny fanamelohana ho faty. Nanoratra i Paoly fa ny fanamarinana (tamin’ny alalan’ny fahasoavan’Andriamanitra) izay mitondra ho amin’ny fiainana dia tonga tamin’ny fahamarinan’ny Anankiray ho an’ny olona rehetra ( Romana 5:18 ).
Raha tsy misy ny soron'i Jesosy sy ny fahasoavan'Andriamanitra, dia mitoetra ao amin'ny fatoran'ny ota isika. Mpanota daholo isika rehetra, miatrika ny sazy mahafaty. Manota antsika amin'Andriamanitra. Izy io dia mamorona rindrina eo anelanelan'Andriamanitra sy isika izay tsy maintsy handrava ny fahasoavany.
Ahoana ny fanamelohana ny ota?
Ny drafi-pamonjen'Andriamanitra dia mitaky ny fanamelohana ny ota. Izao no vakiantsika: amin'ny fandefasana ny Zanany amin'ny endrika nofo mpanota ... [Andriamanitra] nanameloka ny ota tamin'ny nofo (Romana 8: 3). Ity habe ity dia misy refy maromaro. Tany am-piandohana dia nisy ny sazintsika tsy azo ihodivirana noho ny ota, ny fanamelohana ho faty mandrakizay. Amin’ny alalan’ny fanatitra noho ny ota tanteraka ihany no azo hanamelohana na hofoanana io fanamelohana ho faty io. Izany no nahatonga an'i Jesosy ho faty.
Nanoratra ho an'ny Efesiana i Paoly fa rehefa maty tamin'ny ota izy ireo dia novelomina niaraka tamin'i Kristy (Efesiana 2: 5). Manaraka izany ny fehezan-teny manan-danja izay manazava ny fomba ahatanterahantsika ny famonjena: ... amin'ny fahasoavana no namonjy anao ...; Avy amin’ny fahasoavana ihany no ahazoana ny famonjena.
Izahay indray mandeha, tamin'ny alàlan'ny fahotana, dia maty tahaka ny maty, na dia mbola velona tamin'ny nofo aza. Na iza na iza no nohamarinin'Andriamanitra dia mbola iharan'ny fahafatesan'ny nofo ihany, nefa mety efa maty mandrakizay.
Hoy i Paoly amintsika ao amin’ny Efesiana 2:8 : Fa fahasoavana no namonjena anareo amin’ny finoana, ary tsy avy aminareo izany: fanomezan’Andriamanitra izany ... Ny fahamarinana dia midika hoe mihavana amin’Andriamanitra. Ny fahotana dia mampisaraka antsika amin’Andriamanitra. Ny fanamarinana dia manaisotra izany fanavakavahana izany ary mitarika antsika ho amin’ny fifandraisana akaiky amin’Andriamanitra. Avy eo dia voavotra amin’ny voka-dratsin’ny fahotana isika. Voavonjy avy amin’ny tontolo iray voababo isika. Miombona ... amin’ny toetran’Andriamanitra isika ary afa-mandositra ... ny fanirian’izao tontolo izao manimba (2. Petera 1:4).
Momba ireo olona manana fifandraisana toy izany amin'Andriamanitra dia hoy i Paoly: Izao no nanamarina antsika tamin'ny finoana, dia manana fihavanana amin'Andriamanitra isika dm-eh Tompontsika
Jesosy Kristy... (Romana 5:1).
Koa miaina eo ambanin’ny fahasoavana ankehitriny ny kristiana, tsy mbola voaro amin’ny ota, fa mitarika hatrany amin’ny fibebahana amin’ny alalan’ny Fanahy Masina. Hoy i Jaona: Fa raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky sy marina Izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin’ny tsi-fahamarinana rehetra.1. Jaona 1:9).
Amin'ny maha-Kristiana antsika dia tsy hanana toe-tsaina mpanota mahazatra antsika intsony isika. Fa kosa, hitondra ny vokatry ny Fanahy masina eo amin'ny fiainantsika isika (Galatianina 5: 22-23).
Nanoratra i Paoly hoe: Fa asany isika, voaforona tao amin’i Kristy Jesosy mba hanao asa tsara... ( Efesiana 2:1 ). Tsy azo hamarinina amin’ny asa tsara isika. Tonga marina ny olona ... amin’ny finoana an’i Kristy, fa tsy amin’ny asan’ny lalàna ( Galatiana 0:2 ).
Tonga olo-marina isika ... tsy misy asan'ny lalàna, amin'ny finoana irery ihany (Romana 3:28). Fa raha mandeha amin'ny lalan'Andriamanitra isika, dia hiezaka hampifaly azy koa. Tsy ny asantsika no namonjena antsika, fa Andriamanitra no nanome antsika famonjena mba hanaovana asa tsara.
Tsy afaka mahazo ny fahasoavan'Andriamanitra isika. Manome izany ho antsika Izy. Ny famonjena dia tsy zavatra iray ahafahantsika miasa amin'ny alàlan'ny fomba fiasan'ny bus na asa ara-pivavahana. Ny fankasitrahan'Andriamanitra sy ny famindram-po dia mitoetra ho tsy mendrika.
Nanoratra i Paoly fa ny fanamarinana dia avy amin’ny hatsaram-panahy sy ny fitiavan’Andriamanitra (Titosy 3:4). Tsy noho ny asan’ny fahamarinana izay nataontsika izany, fa noho ny famindram-pony (and. 5).
Rehefa niantso antsika Andriamanitra ka nanaraka ny antso tamin’ny finoana sy ny fahatokiana, dia Andriamanitra no manao antsika ho zanany. Mampiasa ny fananganan'anaka eto i Paoly mba hilazana ny asan'ny fahasoavan'Andriamanitra: Mandray fanahy maha-zanaka isika ... izay iantsoantsika hoe: Aba, Ray malala! ( Romana 8:15 ). Amin’izany fomba izany dia lasa zanak’Andriamanitra sy mpandova isika, dia ny mpandova an’Andriamanitra sy mpiara-mandova amin’i Kristy (and 16-17).
Talohan'ny nahazoana fahasoavana, dia andevon'ny herin'izao tontolo izao isika (Galatianina 4: 3). Manavotra antsika i Jesoa mba hanan-janaka (and 5). Hoy i Paoly: Satria zaza ianareo ankehitriny ... dia tsy andevo intsony, fa zaza; fa raha zaza, dia mandova amin'ny alalàn'Andriamanitra (andininy 6-7). Fampanantenana mahagaga izany. Afaka ny ho tonga zanaka natsangan’Andriamanitra isika ka handova ny fiainana mandrakizay. Ny teny grika nadika hoe zanaka ao amin'ny Romana 8:15 sy Galatianina 4: 5 dia huiothesia. Nampiasa an’io teny io tamin’ny fomba manokana i Paoly, izay mampiseho ny fampiharana ny lalàna romanina. Teo amin’ny tontolo romanina niainan’ny mpamaky azy, ny fananganan-jaza dia nanana heviny manokana izay tsy nananany foana teo amin’ireo vahoaka nifehy an’i Roma.
Tamin'ny tontolo romana sy grika, ny fananganan-jaza dia fomba fanao mahazatra amin'ireo saranga sosialy ambony. Ny zaza natsangana dia nosafidian'ny fianakaviana tsirairay. Ny zo ara-dalàna dia nafindra tany amin'ilay zaza. Nampiasaina ho mpandova izany.
Raha nitaizana fianakaviana Romana ianao, dia efa ara-dalàna ny fifandraisan'ny fianakaviana vaovao. Tsy nitondra adidy ihany ny fanabeazana, fa namindra ny zon'ny fianakaviana koa. Ny fananganana ny anaran'ny zaza dia zavatra faran'izay farany, ny fifindran'ny fianakaviana vaovao dia mifamatotra fa ny zaza nitaiza dia natao toy ny zaza biolojika. Koa satria mandrakizay Andriamanitra, dia azon'ny Kristianina romanina fa te hilaza taminy i Paoly hoe: mandrakizay ny toeranao ao an-tranon'Andriamanitra.
Andriamanitra dia misafidy ny hanangana antsika amin'ny tanjona sy ny tsirairay. Jesosy dia naneho io fifandraisana vaovao io amin'Andriamanitra, izay azontsika amin'ny alalany, miaraka amin'ny marika hafa: Rehefa miresaka amin'i Nikodemosy dia nilaza izy fa tsy maintsy ateraka indray isika (Jao. 3: 3).
Izany no mahatonga antsika ho zanak’Andriamanitra. Hoy i Jaona amintsika: Endrey ny fitiavana nasehon’ny Ray antsika, dia ny niantsoana antsika hoe zanak’Andriamanitra, sady tia antsika koa izany! Izany no tsy ahafantaran’izao tontolo izao antsika; satria tsy fantany izy. Ry malala, efa zanak’Andriamanitra isika; nefa tsy mbola nambara izay ho toetsika. Fa fantatsika fa rehefa hiseho izy, dia ho tahaka azy koa isika; satria ho hitantsika Izy araka ny maha izy azy (1. Jaona 3:1-2).
Avy amin'ny fiainana an-tany mankany amin'ny tsy fahafatesana
Koa zanak'Andriamanitra isika, fa tsy mbola nomena voninahitra. Ny vatantsika ankehitriny dia tsy maintsy ovaina raha te hanana fiainana mandrakizay. Ny vatana ara-batana sy simba dia tokony hosoloina vatana tsy maharitra sy tsy mety lo.
In 1. Korintiana 15 Hoy i Paoly: Fa mety hisy hanontany hoe: Ahoana no fanangana ny maty, ary vatana manao ahoana no hihaviany? ( Andininy faha-35 ). Ny vatantsika ankehitriny dia ara-batana, dia vovoka (and 42-49). Ny nofo aman-dra dia tsy mahazo mandova ny fanjakan’Andriamanitra izay ara-panahy sady mandrakizay (and. 50). Fa ity mety lo ity tsy maintsy hitafy ny tsi-fahalòvana, ary ity mety maty ity tsy maintsy hitafy ny tsy fahafatesana (and. 53).
Ity fanovana farany ity dia tsy natao raha tsy amin'ny fitsanganana amin'ny maty, amin'ny fiverenan'i Jesosy. Manazava i Paoly hoe: Miandry ny Mpamonjy isika, dia Jesosy Kristy Tompo, izay hanova ny tenantsika foana ho tahaka ny vatany be voninahitra ( Filipiana 3:20-21 ). Ny Kristiana matoky sy mankatoa an'Andriamanitra dia efa manana zom-pirenena any an-danitra. Saingy tonga saina ihany tamin'ny fiverenan'i Kristy
ity no farany; Rehefa izany dia ny kristiana no mandova ny tsy fahafatesana sy ny fahafenoan'ny fanjakan'Andriamanitra.
Tena velom-pankasitrahana tokoa isika fa nataon’Andriamanitra mendrika ho amin’ny lovan’ny olona masina ao amin’ny mazava ( Kolosiana 1:12 ). Nanafaka antsika tamin’ny herin’ny maizina Andriamanitra ary nametraka antsika tao amin’ny fanjakan’ny Zanany malalany (and 13).
Ireo izay ekena ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia afaka mahazo ny lovan'ny olo-masina ao amin'ny mazava raha mbola manohy matoky sy mankatò an'Andriamanitra izy ireo. Satria voavonjy aminny fahasoavanAndriamanitra isika, raha ny fahitany azy dia feno sy tomombana ny famonjena.
Manazava i Paoly fa raha misy olona ao amin’i Kristy dia olom-baovao izy; lasa ny taloha, indro, tonga ny vaovao (2. Korintiana 5:17). Andriamanitra dia nanisy tombo-kase antsika sy ao am-pontsika ho
Fanomezana ny fanahy (2. Korintiana 1:22). Ny olona niova fo sy nahafoy tena dia efa olom-baovao.
Izay eo ambanin’ny fahasoavana dia efa zanak’Andriamanitra. Omen’Andriamanitra hery ho tonga zanak’Andriamanitra izay mino ny anarany ( Jaona 1:12 ).
Namariparitra ny fanomezan'Andriamanitra sy ny fiantsoany ho tsy azo ivalozana (Romana 11:29, vahoaka). Noho izany dia afaka nilaza koa izy hoe: ... matoky aho fa Izay nanomboka ny asa tsara ao anatinareo no hahavita izany koa mandra-pahatongan’ny andron’i Kristy Jesosy ( Filipiana 1:6 ).
Na dia tafintohina indraindray aza ny olona nomen’Andriamanitra fahasoavana: tsy mivadika aminy Andriamanitra. Ny tantaran’ilay zanaka adala (Lioka 15) dia mampiseho fa mbola mitoetra ho zanany ireo olom-boafidin’Andriamanitra sy voantso na dia misy aza ny fahadisoana. Andriamanitra dia manantena ireo izay tafintohina mba hiala ary hiverina any aminy. Tsy te hitsara olona izy fa te hamonjy azy.
Nesorina tokoa ilay zanaka adala tao amin'ny Baiboly. Hoy izy: Andro firy ny mpiasa an-draiko izay manan-kohanina betsaka nefa maty mosary eto aho! ( Lioka 15:17 ). Mazava ny resaka. Rehefa tsapan'ilay zanaka adala ny hadalàn'ny zavatra nataony dia nibebaka izy ary niverina nody. Namela azy ny rainy. Araka ny nolazain'i Jesosy: Raha mbola lavitra izy, dia hitan'ny rainy ka nitomany; nihazakazaka izy ary namihina ny vozony ary nanoroka azy (Lio. 15:20). Ny tantara dia maneho ny fahatokian’Andriamanitra ny zanany.
Naneho fanetren-tena sy fahatokisana ilay zanaka lahy, nibebaka izy. Hoy izy: Raiko ô, efa nanota tamin’ny lanitra sy taminao aho; Tsy mendrika hatao hoe zanakao intsony aho (Lio. 15:21).
Tsy te handre izany anefa ilay raim-pianakaviana ka nanao fanasana ho an’ilay niverina. Nilaza izy fa maty ny zanako ary velona indray; very izy ka hita indray (and 32).
Raha mamonjy antsika Andriamanitra dia ho zanany mandrakizay isika. Hanohy hiara-miasa amintsika Izy mandra-pahatonga antsika miaraka aminy manontolo amin'ny fitsanganana amin'ny maty.
Ilay fanomezana ny fiainana mandrakizay
Amin'ny fahasoavany no anomezan'Andriamanitra antsika ny teny fikasana mamy sy lehibe indrindra (2. Petera 1:4). Amin’ny alalan’izy ireo no ahazoantsika anjara ... amin’ny maha-Andriamanitra. Ny tsiambaratelon'ny fahasoavan'Andriamanitra dia ao anatin'izany
fanantenana velona tamin’ny nitsanganan’i Jesosy Kristy tamin’ny maty (1. Petera 1:3). Izany fanantenana izany dia lova tsy mety maty izay tehirizina ho antsika any an-danitra (and. 4). Amin’izao fotoana izao dia mbola voaaro amin’ny herin’Andriamanitra isika amin’ny alalan’ny finoana... ho amin’ny famonjena efa vonona haseho amin’ny andro farany (and. 5).
Ny drafitry ny famonjen’Andriamanitra dia ho tanteraka amin’ny farany amin’ny fiavian’i Jesosy fanindroany sy ny fitsanganan’ny maty. Avy eo dia mitranga ilay fiovana voalaza etsy ambony avy amin'ny mety maty ho amin'ny tsy mety maty. Hoy ny apostoly Jaona: Fa fantatsika fa rehefa haseho, dia ho tahaka azy isika; satria ho hitantsika Izy araka ny maha izy azy (1. Jaona 3:2).
Ny fitsanganan’i Kristy tamin’ny maty dia manome antoka fa Andriamanitra dia hanavotra ny fampanantenana ho antsika ny fitsanganana amin’ny maty. Indro, milaza zava-miafina aminareo aho, hoy i Paoly. Tsy ho resin-tory isika rehetra, fa hovana avokoa; ary tampoka teo, ao anatin'ny indray mipi-maso ... ny maty dia hitsangana tsy ho lo, ary isika hovana (1. Korintiana 15:51-52). Mitranga izany rehefa maneno ny trompetra farany, mialoha ny fiverenan’i Jesosy ( Apokalypsy 11:15 ).
Jesosy dia mampanantena fa izay mino Azy dia hanana fiainana mandrakizay; Hatsangako izy amin'ny andro farany, hoy izy nampanantena (Jaona 6:40).
Manazava toy izao ny apostoly Paoly: Fa raha inoantsika fa efa maty Jesosy sady efa nitsangana indray, dia ho entiny koa izay efa nodi-mandry taminy tamin’ny alalan’i Jesosy.1. Tesaloniana 4:14). Ny tiana ambara indray dia ny fotoana hiavian’i Kristy fanindroany. Nanohy ny teniny i Paoly: Fa ny tenan’ny Tompo no hidina avy any an-danitra amin’ny feon’ny didy ... ary izay efa maty ao amin’i Kristy no hitsangana aloha (and. 16). Ary izay mbola velona amin’ny fihavian’i Kristy dia hakarina miaraka aminy ho eny amin’ny rahona eny amin’ny habakabaka hitsena ny Tompo; ary dia ho ao amin’ny Tompo mandrakariva isika (andininy 17).
Mampirisika ny Kristianina i Paoly hoe: “Mifampahereza amin’ireo teny ireo ( andininy 18 ). Ary amin'ny antony tsara. Ny fitsanganana amin’ny maty no fotoana hahazoan’ireo izay eo ambanin’ny fahasoavana ny tsy fahafatesana.
Miaraka amin'i Jesosy ny valiny
Efa voatonona ny tenin’i Paoly manao hoe: Satria ny fahasoavan’Andriamanitra no niseho tamin’ny olona rehetra (Titosy 2:11). Izany famonjena izany no fanantenana sambatra izay navotana amin’ny fisehoan’ny voninahitr’Andriamanitra lehibe sy Jesosy Kristy Mpamonjy antsika (andininy 13).
Mbola ho avy ny fitsanganana amin’ny maty. Miandry izany isika, manantena toa an’i Paoly. Tany amin'ny faran'ny fiainany dia nilaza izy hoe: ... tonga ny fotoana hahafatesako (2. Timoty 4:6). Fantany fa tsy nivadika tamin’Andriamanitra izy. Niady ny ady tsara aho, nahavita ny fihazakazahana aho, nitahiry ny finoana aho ... (and 7). Niandry ny valim-pitiany izy: ... hatramin’izao dia efa voaomana ho ahy ny satroboninahitry ny fahamarinana, izay homen’ny Tompo, Mpitsara marina, ho ahy amin’izany andro izany, tsy ho ahy ihany, fa ho an’izay rehetra tia Azy koa. fisehoana (and 8).
Amin'izany fotoana izany, hoy i Paoly, Jesosy dia hanova ny vatantsika poakaty ... mba ho tonga tahaka ny vatany nomem-boninahitra izy (Filipiana 3:21). Fiovana nataon'Andriamanitra, izay nanangana an'i Kristy tamin'ny maty ary hanome fiainana ny vatanareo mety maty amin'ny alàlan'ny Fanahiny, Izay mitoetra ao anatinareo (Romana 8:11).
Ny dikan'ny fiainantsika
Raha zanak'Andriamanitra isika dia hiara-miaina tanteraka amin'i Jesoa Kristy ny fiainantsika. Ny toetrantsika dia tokony hitovy amin'ny an'i Paul, izay nilaza fa hahita ny fiainany taloha ho maloto mba hahazoako an'i Kristy ... Izy sy ny herin'ny fitsanganany tamin'ny maty tiako ho fantatra.
Fantatr’i Paoly fa mbola tsy tratrany io tanjona io. Manadino izay ao aoriana aho ka miezaka manatratra izay eo aloha ary mitady ny tanjona napetraka, dia ny lokan’ny fiantsoan’Andriamanitra any an-danitra ao amin’i Kristy Jesosy (and 13-14).
Izany loka izany dia ny fiainana mandrakizay. Na iza na iza manaiky an’Andriamanitra ho Rainy sy tia Azy, matoky Azy ka mandeha amin’ny lalany, dia ho velona mandrakizay amin’ny voninahitr’Andriamanitra (1. Petera 5:1). Ao amin’ny Apokalypsy 0:21-6, Andriamanitra dia milaza amintsika izay ho anjarantsika: Homeko maimaim-poana amin’ny loharanon’aina ny mangetaheta. Izay maharesy no handova izany rehetra izany, ary Izaho ho Andriamaniny, ary izy ho zanako.
Bokikely an'ny Fiangonana Erak'izao tontolo izao 1993